६४ वर्षका भुवन केसी किन जहिल्यै सुन्दर ? « Ramailo छ
६४ वर्षका भुवन केसी किन जहिल्यै सुन्दर ?
निर्माता तथा अभिनेता भुवन केसीको भदौ ३१ गते जन्मदिन परेको छ । नेपाली फिल्मका सदाबहार सुन्दर अभिनेतालाई जन्मदिनको शुभकामना ।
भुवन केसी नेपाली फिल्म क्षेत्रका चर्चित र विवादित व्यक्तित्व हुन् । दर्जनौं सफल फिल्ममा अभिनय गरेका भुवन केसीका कन्ट्रोभर्सी पनि दर्जन छन् । विशेषतः केसी महिलाका कारण विवादित बने । दुई श्रीमतीका पति भुवनको जीवनमा थुप्रै युवतीको नाम जोडिए । यस्मा पछिल्लो पटक नायिका जिया केसीको नाम अग्रपंत्तीमा छ । भुवन र जिया केही वर्षदेखि एकसाथ बसिरहेका छन् ।
जे जस्तो चर्चा र विवाद भएपनि हालसम्म फिल्म निर्माणमा सक्रिय रहि रहनु चाहिं भुवन केसीको प्रशंसनिय पक्ष हो । पछिल्ला केही वर्षदेखि उनी आफ्नै छोरा अनमोल केसीलाई लिएर फिल्म निर्माण गर्दै आइरहेका छन् । ‘ड्रिम्स’ मार्फत त उनी निर्देशक समेत भए । पछिल्लो पटक उनले अनमोललाई लिएर ‘क्याप्टेन’ बनाएका छन ।
६४ बर्षका भुवन केसीको सुन्दरतामा अझैपनि कुनै कमी आएको छैन । त्यसैले उनलाई नेपाली फिल्म क्षेत्रका सदाबहार सुन्दर अभिनेता भनिएको हो । यो उमेरसम्म भुवन केसीको सुन्दरताको राज के होला त ? यो भिडियो हेर्नुस् :